“ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ဘာလူမျိုးလဲ?(‪ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို‬ ကုလားလို့ပြောနေကြသူများအတွက်) ” - MYANMARARTICLE
“ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ဘာလူမျိုးလဲ?(‪ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို‬ ကုလားလို့ပြောနေကြသူများအတွက်) ”
သာကီဝင်မြန်မာ(‪ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို‬ ကုလားလို့ပြောနေကြသူများအတွက်)သူတို့ဟာ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ၊ ကောလိယ စတဲ့ သကာကီဝင်တွေရဲ့ သက္ကတိုင်းဟာ မျက်မှောက်ခေတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း မဟုတ်ပဲ နီပေါနိုင်ငံမှာ ဆိုတာတောင် မသိပဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။
သာကီဝင်မင်းသားက ဘုရားဖြစ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ သာကီဝင်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို သေခြာ မဖတ်ဘူးတော့ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုး ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။
(အဲသလို ဘူမသိ ကိုးမသိ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုး ထင်နေရင် သူများ လိမ်ညာတာ ခံရနိုင်ပါတယ်)ဗုဒ္ဓနှင့် သူ့ဆွေတော်မျိုးတော် သက္က ဆိုတဲ့ သာကီဝင် တွေရဲ့ သမိုင်းကတော့ . . .
၁။ သာကီဝင်တွေ ဖြစ်လာမယ့် ဥက္ကာကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ သားတော်လေးပါး၊ သမီးတော် ငါးပါး နဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါများဟာ မဇ္ဈိမဒေသသားများမဟုတ်
(ယနေ့နီပေါနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသ က ဒေသခံတွေမဟုတ်ပဲ) အလွန်ရှေးကျတဲ့ကာလက အလွန်ဝေးကွာတဲ့ဒေသမှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူများ ဖြစ်တယ်။
၂။ အဲ့ဒီလို့ စတင် ရွှေ့ပြောင်းလာချိန်မှာ ကပိလ ရသေ့ကြီးက သူ့မြေနေရာကို မြို့တည်ဖို့ ပေးတဲ့အတွက် ကပ္ပိလဝတ္ထု၊ ကပ္ပိလဝတ် လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။
၃။ သကျ သာကီဝင်တွေ ဘယ်အရပ်ကလာတာလဲလို့ မဇ္ဈိမဒေသက အာရိယံ၊ ဒြာဗီဒီယန် တွေက မေးကြတယ်။ သာကီဝင်တွေက ပြန်ဖြေတယ်။ သူတို့ဟာ အရှေ့ အရပ်က လာကြတာပါ တဲ့။ အရှေ့အရပ်ဆိုတာ သေခြာအောင် “ကပိလဝတ်မှ ကြည့်လျှင် နေထွက်ရာ အရပ်ဟာ သာကီဝင်တွေရဲ့ ဇာတိ ပါ” တဲ့။
၄။ အာရိယံဗြဟ္မဏတွေကတော့ သူတို့ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန် တောင်ကြားလမ်းမှ တဆင့် မဇ္ဈိမ ဒေသတွင်းသို့ အနောက်ဘက်မှ ဝင်ရောက်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး လက်အုပ်ချီ ရှိခိုးပါသတဲ့။
၅။ နောက်တစ်ချက်က နောင် သာကီဝင်ဖြစ်လာမယ့် သူတွေဟာ “ကျွန်းတောကြီး ” တွေ ရှိတဲ့ အရပ်က လာကြတာပါတဲ့။ သူတို့ဟာ ဟိမဝန္တာတောင်ခြေကို ပတ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းလာကြတာ ကျွန်းတောကြီးတွေ ရှိတဲ့ဒေသကို ရောက်တယ်။ ဇာတိမြေနဲ့ တူသမို့ တိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ပြီး နေကြတယ်။
ကပိလ ရသေ့ကြီး ကလည်း မြို့တည်ဖို့ နေရာကို ပေးတယ်။ “သာကဝန=ကျွန်းတော” ကြီးမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံမို့ သာကပြည်လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
၆။ ၁၉၅၈ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်းသုတေသနရဲ့ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ မြို့ဟောင်းများ တူးဖော်မှု အစီရင်ခံစာအရ သာကီဝင်တွေဟာ အနောက်ဘက်က ဝင်လာတဲ့ အာရိယံ တွေလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်မြန်မာ ခေါ် တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။
(သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်ဖြစ်ကြောင်း အခြား အထောက်အထား များစွာ ရှိပေမယ့် စာရှည်လွန်းလို့ ဤမျှသာ)
၇။ ပြန်ချုပ်ရရင် သာကီဝင်တွေဟာ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ စတဲ့ (natives) ဒေသခံများ မဟုတ်ကြပဲ ကပိလဝတ်ရဲ့ အရှေ့ဘက် နေထွက်ရာအရပ် ကျွန်းတောကြီးတွေ ပေါက်တဲ့ အရပ်မှ (migration) ရွှေ့ပြောင်းလာသူများ ဖြစ်ကြတယ်။
၈။ ကပိလဝတ်ရဲ့ နေထွက်ရာ အရပ်လည်း ဖြစ်ရမယ်၊ ကျွန်းတောကြီး တွေလည်း ရှိရမယ်။ အဲ့ဒီ ဒေသ ဘယ်နေရာမှာလို့ စစ်ဆေးလိုက်တော့ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုသာ တွေ့ရပါတယ်။
၉။ ဘီစီ ၉၀၀ ခန့်က ကပိလဝတ်မှ အဘိရာဇာခေါင်းဆောင်တဲ့ သာကီဝင် အုပ်စု တစ်စုဟာ သူတို့ဇာတိဖြစ်တဲ့ သင်္ဃဿ (တကောင်း) ကို ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းလာကြတယ်။
စစ်အင်အား ကြီးတဲ့ အာရိယံကုလားဖြူ မင်းက သမီးတောင်းတာ မပေးလို့၊ အင်အားခြင်းလည်း မယှဉ်နိုင်လို့ ဇာတိတကောင်းကို ပြန်ပြေးလာရခြင်းဖြစ်တယ်။ (ဒါကို သာကီဝင်တွေ ပထမအကြိမ် တကောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှု လို့ခေါ်တယ်)
၁၀။ ဘီစီ ၅၄၀ ခန့်မှာ ဓဇရာဇာ ဦးဆောင်တဲ့ သာကီဝင် အုပ်စုတစ်စုဟာ သူတို့ဇာတိ တကောင်းကို ပြန်ပြေးလာရပါတယ်။ ဝိဋဒူပ မင်းသားက (genocide) လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်လို့ ထွက်ပြေးလာရတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါတွေ အားလုံးကို ချုပ်လိုက်ရင် သာကီဝင်တွေရဲ့ မူလဇာတိ native ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ဥက္ကာကရာဇ် မင်းကြီးရဲ့ သား/သမီး ၉ ဦးနဲ့ အဖွဲ့ဟာ နီပေါနိုင်ငံတွင်းမှာ ကပိလဝတ် စတဲ့ မြို့တွေကို တည်ထောင် နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘိုးတော်၊ ဘေးတော် သာကီဝင်များရဲ့ ဇာတိဟာ မြန်နိုင်ငံဧရိယာတွင်း ဖြစ်သမို့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွန်းကား သလားလို့ တွေးထင်မိတယ်။ကိုင်းဒီတော့ မြန်မာတွေနဲ့ သွေးသားရင်း ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်မင်းသားကနေ ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟာ မြန်မာတွေအတွက် သွေးရင်းသားရင်းပါ။
နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓကို အိန္ဒိယသား ထင်မှတ်နေသူ မဟာပညာရှော်များကို ဗုဒ္ဓဟာ နီပေါနိုင်ငံ ကပိလဝတ်မြို့သား၊ မြန်မာ့သွေးသားရင့်း၊ သူ့ဘိုးဘေးများဟာ မြန်မာပြည်ဇာတိများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အကိုးအကား။ ။ ဦးလှသိန်းထဋ် (ဘီအေ၊ ဓမ္မာစရိယ) ၏ ဗုဒ္ဓနှင့် မြန်မာလူမျိုးမင်းကွန်း ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ရဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်များတောင်ပေါက်ဆရာတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက ပဌဝီကျမ်းသိသာမြင်သာစေရန် နေဝါရီ သာကီဝင် နွယ်များ ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြသလိုက်ပါသည်။
ရုပ်တွေက မြန်မာနဲ့ဆင်လား အိန္ဒိယနွယ်ဖွားနဲ့ဆင်လားကြည့်ခိုင်းလိုက် ရုပ်တူတာတင်မက နေဝါရီဘာသာ စကားမှာ မြန်မာစကားနဲ့တူတာတွေ အားကြီးပဲ ….
ဂဏန်းသချာင်္ ၅=ငါး ကို ငါး လို့ပဲခေါ်တယ်။မီး ကို မီးပူတာကို ပူတာ၊ထိတာကို ထိတာ၊မီးပူဆိုတာကို မီးပူ၊နောက် မေးခွန်းမှန်သမျှ လား ပါတယ်။အငြင်းဝါကျမှန်သမျှ အရှေ့မှာ`မ´ ထည့်ပြီးပြောတယ်။
အာလူး ကို အာလူး ပဲခေါ်တယ် ၀ရံတာ ကို ၀ရံတာ လို့ပဲခေါ်တယ်။ရေထဲ က ငါး ကို လည်း ငါး လို့ပဲ ခေါ်တယ်။နေ၀ါရီ လူမျိူးနှင့် မြန်မာလူမျိူးတ်ို့တူသောနောက်ထပ်စကားချို့ရှိပါသေးတယ်…လမ်း ကို လမ်း။သွားသည်ကို လျှောက် ။သောက်သည်ကို သောက်။အခေါင်းကို ခေါင်း။နှခေါင်းကို နှာ။မျက်စိကို မျက်။
ရာဝေရီယာန် မွန်ဂိုလီယာန် အင်ဒိုအာရီယာန်စတဲ့
မဟုတ်တာသေချာတယ်…။ကျန်တဲ့စကား လုံး အသုံး အနှုန်း တွေ တူတာ တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။နီပေါနိုင်ငံမှာ နေပါလီ လူမျိုးနဲ့ နေဝါရီ လူမျိုးဆိုပြီးလူမျိုး ၂ မျိုးရှိတယ်။
နေပါလီ က ပုဏ္ဏား ဗြဟ္မာဏ မျိုးဖြစ်ပြီး၊နေဝါရီ လူမျိုးက သာကီဝင် မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုပြထားတဲ့ပုံက နေဝါရီ မိန်းကလေးတွေပုံပါ။နေဝါရီ လူမျိုးအုပ်စုသည် တိဘက်တိုဘားမန်း အုပ်စုဖြစ်ပါသည်။ကုလား မျိုး အာရီယာန် နွယ်မဟုတ်ပါသိသာမြင်သာစေရန် ဓာတ်ပုံ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
CREDIT Su Htar ကိုးကား။ ။အနောက်ရိုးမ ချစ်သူ Facebook Account မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
“ ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျဟာ ဘာလူမြိုးလဲ?(‪ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို‬ ကုလားလို့ပွောနကွေသူမြားအတှကျ) ”
သာကီဝငျမွနျမာ(‪ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို‬ ကုလားလို့ပွောနကွေသူမြားအတှကျ)သူတို့ဟာ ကပိလဝတျ၊ ဒဝေဒဟ၊ ကောလိယ စတဲ့ သကာကီဝငျတှရေဲ့ သက်ကတိုငျးဟာ မကျြမှောကျခတျေ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျး မဟုတျပဲ နီပေါနိုငျငံမှာ ဆိုတာတောငျ မသိပဲ ပွောဆိုနကွေတယျ။
သာကီဝငျမငျးသားက ဘုရားဖွဈလာတဲ့ ဗုဒ်ဓနဲ့ သာကီဝငျတှရေဲ့ သမိုငျးကွောငျးကို သခွော မဖတျဘူးတော့ သူမြားပွောတာ ဟုတျလိမျ့နိုးနိုး ဖွဈကုနျကွတာပေါ့။
(အဲသလို ဘူမသိ ကိုးမသိ သူမြားပွောတာ ဟုတျလိမျ့နိုး ထငျနရေငျ သူမြား လိမျညာတာ ခံရနိုငျပါတယျ)ဗုဒ်ဓနှငျ့ သူ့ဆှတေျောမြိုးတျော သက်က ဆိုတဲ့ သာကီဝငျ တှရေဲ့ သမိုငျးကတော့ . . .
၁။ သာကီဝငျတှေ ဖွဈလာမယျ့ ဥက်ကာကရာဇျမငျးကွီးရဲ့ သားတျောလေးပါး၊ သမီးတျော ငါးပါး နဲ့ နောကျလိုကျနောကျပါမြားဟာ မဇ်ဈိမဒသေသားမြားမဟုတျ
(ယနနေီ့ပေါနိုငျငံနဲ့ အိန်ဒိယနယျစပျဒသေ က ဒသေခံတှမေဟုတျပဲ) အလှနျရှေးကတြဲ့ကာလက အလှနျဝေးကှာတဲ့ဒသေမှ ရှပွေ့ောငျးဝငျရောကျလာသူမြား ဖွဈတယျ။
၂။ အဲ့ဒီလို့ စတငျ ရှပွေ့ောငျးလာခြိနျမှာ ကပိလ ရသကွေီ့းက သူ့မွနေရောကို မွို့တညျဖို့ ပေးတဲ့အတှကျ ကပ်ပိလဝတ်ထု၊ ကပ်ပိလဝတျ လို့ ချေါတာ ဖွဈတယျ။
၃။ သကြ သာကီဝငျတှေ ဘယျအရပျကလာတာလဲလို့ မဇ်ဈိမဒသေက အာရိယံ၊ ဒွာဗီဒီယနျ တှကေ မေးကွတယျ။ သာကီဝငျတှကေ ပွနျဖွတေယျ။ သူတို့ဟာ အရှေ့ အရပျက လာကွတာပါ တဲ့။ အရှအေ့ရပျဆိုတာ သခွောအောငျ “ကပိလဝတျမှ ကွညျ့လြှငျ နထှေကျရာ အရပျဟာ သာကီဝငျတှရေဲ့ ဇာတိ ပါ” တဲ့။
၄။ အာရိယံဗွဟ်မဏတှကေတော့ သူတို့ဟာ အာဖဂနျနစ်စတနျ တောငျကွားလမျးမှ တဆငျ့ မဇ်ဈိမ ဒသေတှငျးသို့ အနောကျဘကျမှ ဝငျရောကျလာသူမြား ဖွဈကွောငျး ပွောကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနောကျဘကျကို မကျြနှာမူပွီး လကျအုပျခြီ ရှိခိုးပါသတဲ့။
၅။ နောကျတဈခကျြက နောငျ သာကီဝငျဖွဈလာမယျ့ သူတှဟော “ကြှနျးတောကွီး ” တှေ ရှိတဲ့ အရပျက လာကွတာပါတဲ့။ သူတို့ဟာ ဟိမဝန်တာတောငျခွကေို ပတျပွီး ရှပွေ့ောငျးလာကွတာ ကြှနျးတောကွီးတှေ ရှိတဲ့ဒသေကို ရောကျတယျ။ ဇာတိမွနေဲ့ တူသမို့ တိုငျးနိုငျငံ ထူထောငျပွီး နကွေတယျ။
ကပိလ ရသကွေီ့း ကလညျး မွို့တညျဖို့ နရောကို ပေးတယျ။ “သာကဝန=ကြှနျးတော” ကွီးမှာ ရှိတဲ့ နိုငျငံမို့ သာကပွညျလို့လဲ ချေါကွတယျ။
၆။ ၁၉၅၈ အိန်ဒိယ ရှေးဟောငျးသုတသေနရဲ့ ကပိလဝတျ၊ ဒဝေဒဟ မွို့ဟောငျးမြား တူးဖျောမှု အစီရငျခံစာအရ သာကီဝငျတှဟော အနောကျဘကျက ဝငျလာတဲ့ အာရိယံ တှလေုံးဝ မဟုတျပါဘူးတဲ့။ သာကီဝငျတှဟော တိဘကျမွနျမာ ချေါ တိဘကျတိုဘားမငျး အုပျစုဝငျတှေ ဖွဈပါသတဲ့။
(သာကီဝငျတှဟော တိဘကျတိုဘားမငျး အုပျစုဝငျဖွဈကွောငျး အခွား အထောကျအထား မြားစှာ ရှိပမေယျ့ စာရှညျလှနျးလို့ ဤမြှသာ)
၇။ ပွနျခြုပျရရငျ သာကီဝငျတှဟော အိန်ဒိယ၊ နီပေါ စတဲ့ (natives) ဒသေခံမြား မဟုတျကွပဲ ကပိလဝတျရဲ့ အရှဘေ့ကျ နထှေကျရာအရပျ ကြှနျးတောကွီးတှေ ပေါကျတဲ့ အရပျမှ (migration) ရှပွေ့ောငျးလာသူမြား ဖွဈကွတယျ။
၈။ ကပိလဝတျရဲ့ နထှေကျရာ အရပျလညျး ဖွဈရမယျ၊ ကြှနျးတောကွီး တှလေညျး ရှိရမယျ။ အဲ့ဒီ ဒသေ ဘယျနရောမှာလို့ စဈဆေးလိုကျတော့ ယနေ့ မွနျမာနိုငျငံ ကိုသာ တှရေ့ပါတယျ။
၉။ ဘီစီ ၉၀၀ ခနျ့က ကပိလဝတျမှ အဘိရာဇာခေါငျးဆောငျတဲ့ သာကီဝငျ အုပျစု တဈစုဟာ သူတို့ဇာတိဖွဈတဲ့ သင်ျဃဿ (တကောငျး) ကို ပွနျလညျ ရှပွေ့ောငျးလာကွတယျ။
စဈအငျအား ကွီးတဲ့ အာရိယံကုလားဖွူ မငျးက သမီးတောငျးတာ မပေးလို့၊ အငျအားခွငျးလညျး မယှဉျနိုငျလို့ ဇာတိတကောငျးကို ပွနျပွေးလာရခွငျးဖွဈတယျ။ (ဒါကို သာကီဝငျတှေ ပထမအကွိမျ တကောငျးကို ရှပွေ့ောငျးဝငျရောကျမှု လို့ချေါတယျ)
၁၀။ ဘီစီ ၅၄၀ ခနျ့မှာ ဓဇရာဇာ ဦးဆောငျတဲ့ သာကီဝငျ အုပျစုတဈစုဟာ သူတို့ဇာတိ တကောငျးကို ပွနျပွေးလာရပါတယျ။ ဝိဋဒူပ မငျးသားက (genocide) လူမြိုးတုနျး သတျဖွတျလို့ ထှကျပွေးလာရတာ ဖွဈတယျ။
ဒါတှေ အားလုံးကို ခြုပျလိုကျရငျ သာကီဝငျတှရေဲ့ မူလဇာတိ native ဟာ မွနျမာနိုငျငံ ဖွဈပွီး ဥက်ကာကရာဇျ မငျးကွီးရဲ့ သား/သမီး ၉ ဦးနဲ့ အဖှဲ့ဟာ နီပေါနိုငျငံတှငျးမှာ ကပိလဝတျ စတဲ့ မွို့တှကေို တညျထောငျ နထေိုငျခဲ့ကွခွငျး ဖွဈတယျ။
ဗုဒ်ဓရဲ့ ဘိုးတျော၊ ဘေးတျော သာကီဝငျမြားရဲ့ ဇာတိဟာ မွနျနိုငျငံဧရိယာတှငျး ဖွဈသမို့ ထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ထှနျးကား သလားလို့ တှေးထငျမိတယျ။ကိုငျးဒီတော့ မွနျမာတှနေဲ့ သှေးသားရငျး ဖွဈတဲ့ သာကီဝငျမငျးသားကနေ ဘုရားဖွဈသှားတဲ့ ဗုဒ်ဓဟာ မွနျမာတှအေတှကျ သှေးရငျးသားရငျးပါ။
နိုငျငံခွားသား မဟုတျပါဘူး။ ဗုဒ်ဓကို အိန်ဒိယသား ထငျမှတျနသေူ မဟာပညာရှျောမြားကို ဗုဒ်ဓဟာ နီပေါနိုငျငံ ကပိလဝတျမွို့သား၊ မွနျမာ့သှေးသားရငျ့း၊ သူ့ဘိုးဘေးမြားဟာ မွနျမာပွညျဇာတိမြား ဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
အကိုးအကား။ ။ ဦးလှသိနျးထဋျ (ဘီအေ၊ ဓမ်မာစရိယ) ၏ ဗုဒ်ဓနှငျ့ မွနျမာလူမြိုးမငျးကှနျး ဆရာတျော ဦးဝိစိတ်တသာရာ ဘိဝံသ ရဲ့ မဟာဗုဒ်ဓဝငျမြားတောငျပေါကျဆရာတျောရဲ့ ဗုဒ်ဓသာသနိက ပဌဝီကမျြးသိသာမွငျသာစရေနျ နဝေါရီ သာကီဝငျ နှယျမြား ဓာတျပုံဖွငျ့ ပွသလိုကျပါသညျ။
ရုပျတှကေ မွနျမာနဲ့ဆငျလား အိန်ဒိယနှယျဖှားနဲ့ဆငျလားကွညျ့ခိုငျးလိုကျ ရုပျတူတာတငျမက နဝေါရီဘာသာ စကားမှာ မွနျမာစကားနဲ့တူတာတှေ အားကွီးပဲ ….
ဂဏနျးသခြာင်္ ၅=ငါး ကို ငါး လို့ပဲချေါတယျ။မီး ကို မီးပူတာကို ပူတာ၊ထိတာကို ထိတာ၊မီးပူဆိုတာကို မီးပူ၊နောကျ မေးခှနျးမှနျသမြှ လား ပါတယျ။အငွငျးဝါကမြှနျသမြှ အရှမှေ့ာ`မ´ ထညျ့ပွီးပွောတယျ။
အာလူး ကို အာလူး ပဲချေါတယျ ဝရံတာ ကို ဝရံတာ လို့ပဲချေါတယျ။ရထေဲ က ငါး ကို လညျး ငါး လို့ ပဲ ချေါတယျ။နဝေါရီ လူမြိူးနှငျ့ မွနျမာလူမြိူးတို့တူသောနောကျထပျစကားခြို့ရှိပါသေးတယျ…လမျး ကို လမျး။သှားသညျကို လြှောကျ ။သောကျသညျကို သောကျ။အခေါငျးကို ခေါငျး။နှခေါငျးကို နှာ။မကျြစိကို မကျြ။
ရာဝရေီယာနျ မှနျဂိုလီယာနျ အငျဒိုအာရီယာနျစတဲ့
မဟုတျတာသခြောတယျ…။ကနျြတဲ့ စကား လုံး အသုံး အနှုနျး တှေ တူတာ တှေ အမြားကွီး ကနျြသေးတယျ။နီပေါနိုငျငံမှာ နပေါလီ လူမြိုးနဲ့ နဝေါရီ လူမြိုးဆိုပွီးလူမြိုး ၂ မြိုးရှိတယျ။
နပေါလီ က ပုဏ်ဏား ဗွဟ်မာဏ မြိုးဖွဈပွီး၊နဝေါရီ လူမြိုးက သာကီဝငျ မြိုးဖွဈပါတယျ။အခုပွထားတဲ့ပုံက နဝေါရီ မိနျးကလေးတှပေုံပါ။နဝေါရီ လူမြိုးအုပျစုသညျ တိဘကျတိုဘားမနျး အုပျစုဖွဈပါသညျ။ကုလား မြိုး အာရီယာနျ နှယျမဟုတျပါသိသာမွငျသာစရေနျ ဓာတျပုံ တငျပေးလိုကျတာပါ။
CREDIT Su Htar ကိုးကား။ ။အနောကျရိုးမ ခဈြသူ Facebook Account မှကူးယူဖျောပွပါသညျ။
(၄)နှစ်နီးပါး အလုပ်လုပ်ပြီးရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သိန်း (၂၈၉၀) တန် ကားသစ်ကြီး ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို
ကွမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကျောက်ကပ်ကျောက်ကြေ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်တာပါ